Taliban oo sheegtay iney kordhineyso iskaashiga kala dhaxeeya Turkiga. | Dayniiile.com:-wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Taliban oo sheegtay iney kordhineyso iskaashiga kala dhaxeeya Turkiga.
Taliban oo sheegtay iney kordhineyso iskaashiga kala dhaxeeya Turkiga.
Afhyeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Suhayl Shaheen ayaa sheegay in dalalka Afghaanistaan iyo Turkigu uu ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah isla markaana dowladda cusub ee Mullah Xasan Akhund ay doonayso in ay sii kordhiso iskaashiga kala dhaxeeya Turkiga.
Shaheen ayaa sheegay in Afghaanistaan ay rabto in ay sare u qaaddo iskaashiga ay la leedahay Turkiga waliba dhinacyo kala duwan.
Wuxu intaa raaciyay in gudaha Afghanistan ay joogaan injineero iyo shaqaale kale oo ka soo jeeda dalka Turkiga kuwaas oo uu tilmaamay in ay dalka ka hayaan howlo muhiim ah.
Afhyeenka u hadlay Taliban oo waraysi siinayay warbaahinta laga leeyahay dalka Turkiga ee Haberler.com, waxaa uu yiri: “Waxaan rabnaa in aan xoojino xiriirka Turkiga aan la leenahay mustaqbalka waxaan doonaynaa in aan sare u qaadno iskaashiga dhinacyada waxbarashada dhismaha iyo dhaqaalaha”.
Mar uu ka jawaabayay su’aal la waydiiyay oo ku saabsaneed siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, waxaa uu sheegay in dal walba uu leeyahay siyaasad arimo dibadeed oo isaga gooni u ah ayna sidaa u tixgalinayaan arrintaas.
Shaheen ayaa tilmaamay in dowladda cusub ee Afghanistan ay muhiimadda siinayso horumarinta danaha isku midka ah ee ka dhaxeeya iyaga iyo dalka Turkiga.
Waraysigaan uu bixiyay afhyeenka Taliban wuxuu ku sheegay in hadba mowqifkoodu uu ku xiran yahay sida uu noqdo kan dalka Turkiga:, “Waxaan u qaadan doonnaa mowqifkeenna sida Turkiga uu ka doonayo xiriirka, haddii uu ka baxo sida walaalka Muslimka ah.”
“Markaas annaguna waxaan ka soo bixi doonnaa si la mid ah taa, waana la soo dhaweynayaa. Waxaana u aragnaa Turkiga walaal Muslim ah”, ayuu yiri Suhayl Shaheen.
Wuxuu sheegay in ay socdaan wadahadllo u dhaxeeya Turkiga Taliban iyo Qadar, kuwaas oo ku saabsan howlaha garoonka Kabul. Bishii la soo dhaafay ayay Taliban ku boorisay Turkiga inuu gacan ka gaysto arrinta garoonka caasimadda Kabul.
Previous articleSicirka shidaalka dalka Kenya oo cirka isku shareerey iyo gaadiidkii oo qaali noqday
Next articleWasiirkii hore ee ammniga Xundubey oo baajiyay kulan bari uu ku qaban lahaa Muqdisho
Wasiir Khadiijo oo Garab Istaagtay Ra iisal wasare Rooble
Mohamed Abdullahi Mohamed - September 14, 2021 0
Wasiirka Gargaarka Xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa noqotay Wasiirkii u horreeyay ee Xukuumadda oo garab istaag buuxa u muujisa Agaasimaha KMG NISA ee...
Wax garadka Dhuusamareeb iyo Cadaado oo ka hadalay dagaalo ka soo...
Diyaaraddii (flight number ahaa TK686) oo uu saarnaa Fahad Yaasiin oo...
Wasiirka waxbarashada dowladda Taalibaan oo sheegay in haweenka dalkaasi ay sii...
Ahlusunada Gobolada Dhexe oo dhoola tus milatari ku soo...
Dowlada Qadar oo Malaayiin Doolar ku bixineysa In la joojiyo kiiska...
Ra’iisul Wasaare Rooble oo war-saxaafadeed soo saaray goor dhawayd warqadii ka...
Cabdulcasiis Butafliiqa: Taariikhda hogaamiyihii ugu mudada dheeraa Aljeeriya ee geeriyooday
Madaxweynaha Galmudug oo kulan gaar ah la yeeshay qaar ka mid...
Taliyahii Hore ee NISA oo lagu qabtay Dalka Jabuuti